सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ को जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? – Koshidaily
सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ को जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ?
access_alarms Koshi daily ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०४:११	chat_bubble_outline 0	Comments
सीताराम कट्टेल (धुर्मुस)को आज जन्मदिन परेको छ । लामो समयदेखि उनी कलाकरिता क्षेत्रमा लागि’परेका छन् । कला’कारिता क्षेत्रसँगै उनी २०७२ सालको भूकम्प’पश्चात भने श्रीमती कुञ्जना समेत’लाई साथमा लिएर समाजसेवामा लागेका छन् ।यसका लागि उनले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डे:सनको स्थापना नै गरेका छन् । र उनी:हरुको विश्वसनी:यताका आधारमै देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो योगदान दिँदै आएका छन् ।
सीताराम कट्टेल (धुर्मुस)सोलुखुम्बु जिल्लाको तत्का:लीन नेचा बेतघारी गा.वि.स.मा जन्मि:एका हुन् । बुवा बोगराज कट्टेल र आमा कमला कट्टेलको जेठो छोरो:का रुपमा वि.सं २०४० साल असोज ४ गते उनको जन्म भएको थियो । उनी ८ वर्षको छँदै उनको परिवार झापा झरेको थियो ।
माध्यमिक तह’सम्मको अध्ययन भने सीताराम कट्टेलले झा’पाको गौरादहमा पूरा गरेका थिए ।निम्न आयस्तर भएको परिवारमा जन्मिएका उनले बाल्य:कालदेखि नै आर्थिक अभाव भोगेर हुर्कि’एका थिए । कापी’कलमको जोहो गर्नका लागि उनी कहिले हलो जोत्थे त कहिले अरुको स्केच चित्र बनाउँथे ।
खेतबारीको काम, घाँस दाउरा र घरायसी काम गर्दै अध्ययनलाई समेत अघि बढा:एका उनी अध्ययनका क्षेत्रमा समेत कृया:शील भएर लाग्ने गर्थे । पढाईमा तेजिलो भएकै कारण पनि सीता:रामले एसए:लसी प्रथम श्रेणीमा पास गरेका थिए । उच्च शिक्षाका लागि भने उनी बुवाले ऋण गरेर जुटाएको १७ सय रुपैयाँ गो:जीमा राखेर काठमाडौं आएका थिए ।
तर बुवाले ऋण खोजेर दिए:को पैसा कोठा खोज्दा, र कोठाका निम्ति सामान जुटाउँदा नै सकियो । त्यसपछि उनले चित्र बनाउनेदेखि भाँडा बेच्ने काम:सम्म गरेका थिए । यस्ता विभिन्न काम गरेर जम्मा गरेको पैसाले रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्प:समा भर्ना भए । साथीह:रुलाई जोक र क्यारिकेचर गरेर हँसा:एको भरमा समेत थुप्रै छाक टारेका थिए उनले ।
उनी पत्रपत्रिका पढ्ने, टेलि:भिजन हेर्ने भने गरिरहन्थे । उनलाई बेला बेलामा साथी:हरुले कलाकार बन्न अभि:प्रेरित गरिरहन्थे । साथीहरुले गरेको त्यो अनुरोध नै कला:कारिता क्षेत्रमा लाग्न प्रेरणाको श्रोत बन्यो त्यसैबीचमा केही समय:पछि उनलाई कलाकार बन्ने भूत चढ्यो ।
त्यसपछि उनी हाँस्य:कलाकार खेम शर्मासँगै बस्न थाले । खेम शर्मासँगै हिँड्न थालेपछि चिनजा:नसमेत बढ्दै गयो । तर, गतिलो अवसर भने पाउन सकेका थिएनन् । अन्त त उनी हार मान्दै झापा फर्किए ।
काठमाडौंदेखि हार मानेर झापा फर्किएका सीता:राम झापामा अडिएर रहन भने स:केनन् । फेरि संघर्ष:सँग जुध्ने निर्णय गरी फेरि राजधानी नै फर्किएर आए । त्यसपछि फेरि संघर्ष गर्न थाले । त्यसको केही समयपछि भने उनले सन्तोष पन्तको टेलि:चलचित्र ‘हिजो आजका कुरा’ मा छोटो संवाद बोल्ने मौका पाए ।
औपचा:रिक रुपमा भने हाँस्य:कलाकार जितु नेपालले उनलाई कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गराए । गीताञ्जली टेलि:चलचित्रमा अभिनय गर्ने मौका जुरेसँगै उनको भेट केदार घिमिरे (माग्ने बुढा) सँग हुन पुग्यो ।
त्यसपछि भने धुर्मुस र माग्ने बुढाको जोडी’लाई दर्शकले राम्रैसँग रुचाउन थाले । गीताञ्ज:लीमा अभिनय गर्दागर्दै उनले दीपकराज गिरीसँगको चिन:जानका कारण तितो सत्यको १४ भागसम्म अभिनय गर्ने अवसर प्राप्त गरे । पछि केदार घिमीरे’सँगको सहका:र्यमा मेरी बास्यै हाँस्य टेलिश्रृंखला निर्माण गर्न सुरु गरे ।
मेरी बास्सैमा सी:तारामले अभिनय गरेको धुर्मुस पात्रले निकै चर्चा कमाउन सफल भयो । र सीतारामलाई दर्शक:ले बिर्सिदिए तर उनै सीता:रामको धुर्मुस क्यारेक्टर भाने सबैको मन मस्ति:ष्कमा बस्न सफल भयो ।
मेरी बास्सैमा उनले धुर्मुस’को मात्र नभएर खडानन्द, नक्कली केपी ओली,खड्काजी, मुस्कान पासा, आइते’लगायत धेरै भूमिको निर्वाह गरेका थिए । एउटै टेलि’श्रृङ्खलामा सबैभन्दा धेरै भूमिका’मा देखिएका कलाकार हुन् सीताराम कट्टेल ।
मेरी बास्सै निर्माण तथा अभिनयकै क्रम’मा उनले धुर्मुसको जोडीको रुपमा देखिएकी कुञ्जना घिमिरे(सुन्तली)सँग विवाह गरे । अहिले उनी’हरुको एक छोरी समेत रहेकी छिन् । छ एकान छ, वडा नम्बर ६ लगायतमा सफल चलचि’त्रहरुमा समेत उनले अभि’नय गर्नुका साथै लगानी समेत गरेका थिए ।
वैशाख १२ को गोरखा भूकम्प:पश्चात धुर्मुस सुन्तलीको जोडी सामाजिक काममा अत्यन्तै सक्रिय भएर लागि परेका छन् । भूकम्प:पश्चात यो जोडीको सक्रि:यतामा काभ्रे, महो:त्तरीलगायतका स्थान’हरुमा एकीकृत बस्तीको समेत निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
धुर्मुस् सुन्तली एकीकृत नमुना बस्ती नाम दिइएको उक्त बस्तीले धेरैबाट प्रशंसा पाउनुको साथै धेरैबाट आर्थिक सहयोग समेत जुटेको छ ।
यस्तै, भूकम्प प्रभावित’लाई कपडा बाँड्नुका साथै महोत्तरीको बर्दिबासमा रहेको मुसहर बस्तीमा राहत बाँडेका थिए । यो सामा’जिक कामलाई अझै सक्रिय रुपमा अगा’डि बढाउन उनीहरुले वि.सं २०७२ सालमा धुर्मुस सुन्तली फाउण्डे:शन स्थापना गरेका थिए ।